परिधावी नाम सम्वत्सर श्रीशाके १९४१ शिशिर ऋतु नेपाल सं. ११४०, वि.सं. २०७६ फाल्गुण १२ गते तद्अनुसार सन् २०२० फरवरी २४ तारिख सोमबार फाल्गुण शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि शतभिषा नक्षत्र शिव योग ७ः३२ पर सिद्धि योग किंस्तुघ्न करण ८ः५४ पर बालव करण आनन्दादिमा अमृत योग चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः३६ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः०० बजेमा हुनेछ । ग्याल्पो ल्होसार ।
मेष – सुख समृद्धि बढ्ला । साझेदारीको काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आयात–निर्यातसित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । सुख सुविधा बढ्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग समर्थन मिल्नेछ ।
बृष – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य धन यश मान महत्व बढ्ला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । गौरव बृद्धि होला । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ ।
मिथुन – दिन शुभ र भाग्यवर्द्धक सावित हुनेछ । मिठो भोजन मिल्ला । आरोग्यता बढ्ला । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । इष्टमित्र सन्तति सुख बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ ।
धनु – सुख समृद्धि मान यश महत्व बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । अन्नधन बढ्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको काम बन्नुसँगै लगानी लगाइएको धन उठ्ला । साझेदारीको काम बन्नेछ । जीवनसाथीको पनि सहयोग समर्थन मिल्नेछ ।
कुम्भ – शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । सन्तान सुख मिल्नेछ । यात्रा होला । धर्म कर्ममा रुचि बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ ।
मीन – धनसम्पति बढ्ला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । आशा उत्साह बढ्ला । यात्रापरक काम बन्नेछ । सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछ ।
भारत सरकारसँग पहल गर्न आग्रह इन्सेकको आग्रह